दक्षिण अफ्रीका सजिलो छ; रक्सी बेचिन्छ, स्कूल खोल्ने ढिलाइ हुन्छ - पोलिटिकोपेथी
दक्षिण अफ्रीका सजिलो छ; रक्सी बेचिन्छ, स्कूल खोल्न ढिलाइ हुन्छ
जुन 1, 2020 जुन 1, 2020
अफ्रिका दक्षिण अफ्रिका
केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका - धेरै दक्षिण अफ्रिकीहरूले सोमबार बिहान रक्सी पसलहरुमा लाइन लगाए, किनकि दुई महिनाको प्रतिबन्ध पछि रक्सीको बिक्रीलाई फेरि अनुमति दिइएको थियो। कोरोनाभाइरस प्रकोप
तर दक्षिण अफ्रिका - यो महाद्वीपको सबैभन्दा विकसित अर्थतन्त्र र COVID-१ of को सब भन्दा बढि पुष्टि भएका घटनाहरूको साथसाथै यसको कडा तालाबन्दीमा आराम पुर्‍यायो भने धेरै जसो स्कूलको कक्षा खोल्न ढिलाइ भयो र चर्चहरूले कसरी सुरक्षित रूपमा सेवाहरू पुनः सुरु गर्न सक्दछन् भन्ने बारेमा बहस भयो।
सरकारले दुई कक्षालाई अर्को साताको लागि खोल्ने योजनालाई स्थगित गर्यो जसले गर्दा केहि अण्डर-तैयार स्कूलहरू कक्षा7र १२ को कक्षा पुन: सुरू गर्न तयार हुन सक्नेछन्, प्राथमिक विद्यालय र उच्च विद्यालयको अन्तिम वर्षहरू।
सोमबारदेखि मण्डलीहरूको संख्याको सीमिततासहित पूजा गर्ने ठाउँहरू खोल्न अनुमति दिइयो, यद्यपि धेरै धार्मिक समूहहरूले उक्त अवसरलाई इन्कार गर्ने कुरा बताए। उनीहरूले भने कि उनीहरू मानिसहरूलाई एक बन्द भवनमा जम्मा गर्ने खतराका बारे चिन्तित थिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका थिए - र कतिले भनेका थिए कि चर्चमा आउन सक्ने मानिसहरूको संख्या सीमित गर्नु उनीहरूको मूल्यमान्यता विपरीत हो।
दक्षिण अफ्रिकामा ,32,000२,००० भन्दा बढी कोभिड १ cases घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको छ र 19०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। सरकारले चेतावनी दिन्छ कि संक्रमणको संख्या बढ्नेछ र अगस्ट वा सेप्टेम्बर सम्म शिखर अपेक्षित हुँदैन।
अझै, रक्सीको प्रतिबन्ध माथिको आरामले धेरैलाई राहत प्रदान गर्यो, जसले आफ्नो मदिरा क्याबिनेटहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो सीधा कामको सट्टामा काम गर्ने देशको अर्थतन्त्रको पनि खुल्यो।
केप टाउन नजिकै मकासारको गरीब शहरमा, बिहान 4.30: .० मा मानिसहरू घर छोडेर गए, त्यहाँका बासिन्दाहरूले भने, रक्सी पसलहरूमा लाइनहरूमा ठाउँहरू सुरक्षित गर्न। स्टोर २ March मार्चदेखि पहिलो पटक बिहान9बजे खोल्ने तय गरिएको थियो। कोहीले बियर र वाइनको बोतलहरू बोक्न प्लास्टिक क्रेट लिएर हिंडे।
नजिकैको सोमरसेट वेस्टको शहरमा, सामाजिक दुरीका लाइनहरू पसलबाट बाहिर, फुटपाथ र शपिंग मल्लको पार्कि lotsमा तानिए।
जोहान्सबर्ग सुपरमार्केटमा बिक्री सुरु हुन अनुमति दिनको लागि वाइन रैकबाट स्क्रीन हटाइएपछि चीयर्स उठे। मद्यको लागि पर्खने किनमेल गर्नेहरूको लाइन पसलमा छिरायो।
टोनी भ्यान श्याल्कवाइकले भने, “यसलाई दुई महिना बितिसकेको छ, जो खोल्नको लागि एक घण्टा पहिले एउटा पसलमा पुगेका थिए। उनले भने कि उनी बियर, सेतो मदिरा, रातो वाइन र ब्रान्डी पाउने आशा राख्छन - जसलाई उनले "केवल आधारभूत कुराहरू" भनेर उल्लेख गरे।
जोहान्सबर्गको सम्पन्न शहरको एउटा रक्सीको पसलमा लोकप्रिय ब्रान्डको मदिराको सेल्फहरू दुई घण्टामा खाली गरियो, महँगो महँगो सामान मात्र बिक्री नगरिएको थियो। मदिरा केवल सोमबार देखि बिहिबार बिहान9देखि साँझ between बिहान सम्म बेच्न मिल्छ, नयाँ रिलक उपायहरु अन्तर्गत।
त्यहाँ भण्डारन गरिएको मदिरा बिरूद्ध चेतावनीहरू थिए र केही स्टोरहरूले ग्राहकहरूले कति खरीद गर्न सक्दछन् भनेर सीमा राख्छन्। केही ग्राहकहरू एक भन्दा बढि स्टोरमा पुनःबन्द गर्न गए, सरकारले सतर्कतालाई ध्यानमा राख्दै केही क्षेत्रहरू - जसलाई "कोरोनाभाइरस हटस्पट" भनेर सम्बोधन गरिएको छ - उनीहरूको संक्रमणको दर नाटकीय रूपमा बढ्यो भने कडा तालाबन्दी गर्ने उपायमा फर्किन सक्छ। यसको मतलब जोहानेसबर्ग र केप टाउन जस्ता प्रमुख शहरहरू सहित, केही क्षेत्रमा विवादास्पद मदिरा प्रतिबन्ध लागू गरीएको हुन सक्छ।
एक घोषणामा ढिलाइ गरेपछि शिक्षा विभागले भन्यो कि राष्ट्रव्यापी विद्यालयहरू फिर्ताको मिति अब 8. जून थियो। स्कूलले सोमबारदेखि “विद्यार्थीहरूको आगमनको लागि तयारी” गर्नेछ, विभागले जनाएको छ। तर केप टाउनमा प्रान्तीय शिक्षा विभागले उनीहरूलाई तयार रहेको बताए पछि केही विद्यालयहरू अगाडि बढ्न थाले र खोलियो। एक हाई स्कूलमा, विद्यार्थीहरू पंक्तिमा लाइनमा खडा हुन्छन् र तापक्रम थर्मल उपकरणको साथ लिएर उनीहरू प्रवेश गर्न अघि प्रश्नहरूको जवाफ दिन, नियमहरूको अंश जुन सबै स्कूलहरूमा लागू गरिनेछ।
अफ्रिकी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीलगायत विपक्षी पार्टीलगायत कसै-कसैले उपासना स्थल खोलेको स्वागत गरे भने अरूले भने यो एकदम खतरनाक छ र तिनीहरू बन्द रहन्छन्।
दक्षिण अफ्रिकाको जेसुइट इन्स्टिच्युटले गत हप्ता जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "यो अचानक, यस्तो हतार हतार गरिएको कदम शंकास्पद छ।"
सरकारले आदेश दियो कि मण्डलीहरुमा अधिकतम people० जना लाई अनुमति दिइनेछ र कre्ग्रेसनहरु १. meters मिटरको दूरीमा जहिले पनि उभिनु पर्छ र हात धुनु वा सफा गर्नु पर्छ।
जेस्युइट इन्स्टिच्यूटले भने, “विश्वको अन्य भागहरूमा पनि क्लस्टरको प्रमाणले संकेत गर्दछ कि पूजा स्थलहरूमा पनि कडा सामाजिक दूरीका नियमहरू पालना गरिएको थियो,” जेसुइट इन्स्टिच्यूटले भने। “जति धेरै व्यक्तिहरू मिसिन्छन् त्यति नै त्यहाँ फैलिने सम्भावना हुन्छ। पूजा गर्ने ठाउँहरू भाइरसबाट सुरक्षित छैन। ”
जेसुइट्सले questioned० भन्दा बढी सेवामा उपस्थित हुन चाहन्छ भने चर्च, मस्जिद, सभाघर र मन्दिरहरू कसरी मानिसहरूबाट टाढा हुने आशा गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गरे।
"धार्मिक नेताहरूका लागि यो निर्णय गर्न असम्भव कुरा हो," उनीहरूले भने। "के पुलिसले worship० भन्दा बढी व्यक्तिको जग्गा भेला पार्नेछ?"
एपी पत्रकार जेरोम डिले र जोहानिसबर्गमा एन्ड्र्यू माल्ड्रमले योगदान गरे।
अघिल्लो पोस्ट पहिलो संशोधन अधिकार - यदि तपाईं राष्ट्रपतिसँग सहमत हुनुहुन्छ
अर्को पोस्ट रेन्केड: स्पेनको शीर्ष most सबैभन्दा लोकप्रिय एयरबएनबी सूची
ट्रिस्टे: इटलीले स्लोभेनियाई समुदायलाई फासिस्ट आगो लगाएको १०० बर्ष पछि सांस्कृतिक स्थल फर्काउँछ
इटालीले आज एक पूर्व स्लोभेनियाली सांस्कृतिक केन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्यो - जुन सय वर्ष पछि यसलाई जलाइयो
यस वर्षको सुरुमा कोरोनाभाइरसको प्रारम्भिक डाउनप्लेप्लि after पछि पेलोसीले 'होइन' पछुताए
“होइन, हामीले के ठीक समयमा गरेको थियौं पहिलो COVID बिल लेख्दै थियो, जुन हामीले ल्यायौं